BBC Somali | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Bishan August waxaa la xusayaa sanad guuradii 75-aad ee ka soo wareegtay markii bamkii Atoomigga 1945-kii lagu dhuftay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee dalka Japan. Tirada dadka bamkaasi ku dhintay waa qiyaas, hase yeeshee waxaa lagu sheegaa 140,000 oo qof oo ka mid ahaa 350,000 oo qof oo Hirooshima ku noolaa markaas, halka magaalada Nagaasakina ay ku dhinteen 74,000 oo ruux. Bamkaasi ayaa wuxuu sababay inuu istaago dagaalkii ka socday qaaradda Aasiya, iyada oo ay Japan isu dhiibtay xulafadii uu hoggaaminayay Mareykanka, taariikhdu markii ay ahayd 14-kii bishii August ee sanadkii 1945-kii. Balse dhinacyada dhaleeceeya Japan ayaa sheegaya iney marki …
Mas’uuliyiinta dalka Indonesia ayaa si aadag u sheegay in ay soo afjari doonaan gabdhaha la afduubto ka dibna la guursado, arrintaas oo caado dhaqameed ka ah jasiiradda Sumba. Waxay arrintan soo shaac baxday ka dib markii la afduubtay gabadh taas oo buuq badan ka dhashay, waxayna sababtay in wax la iska weydiiyo hab-dhaqankaas. Gabadh loogu magacdaray Citra ayaa maalin waxay guda gashay shaqadeeda, waxayna la kulantay laba rag ah oo u sheegayy in ay yihiin saraakiil katirsan dowladda, waxayna u sheegeen in ay doonayaan in ay kormeeraan mashruuc ay wax ka waday gabadha oo laga hirgelinayay deegaankaas. Saacad gudaheeda, raggii …
Marwo Ababa G/sillaase iyo Seygeeda Gabre Kiristos waxay isqabeen ama ay noolal wadaag ahaayeen 50 sano. Dhawaanna waxay xuseen sanad guuradii 50aad ee guurkooda ka soo wareegtay iyada oo munaasabaddaasina ay ka soo qayb galeen 9 carruur oo ay dhaleen iyo 17 carruur oo ay carruurtooda sii dhaleen. Waxayna qoysaskaasi nus qarniga noolasha ku mideysnaa ay sheegayaan iney muddo intaa dhan ay wada noolaadaan ay ugu wacneed “Samir iyo Iisu dulqaadasho”. “Labada qof ee isqaba ama wada nool midkood inuu khalad ka dhaca waa lagama maarmaan balse iney khaladka dhacay si deggan ay u xalliyaan ayaa u horseedaya iney noolal …
Bulsho walba oo dunida ku nool waxay leedahay dhaqan soo jireen ah, laakiin iyadoo dhaqanno badan laga tagay markii ay dunidu horumar sii gaartay, wali waxaa jira kuwo aan laga tallaabsanin, balse sii xoogeystay. Qaar ka mid ah waddamada Aasiya iyo Afrika, waxaa aad looga qaddariyaa dhaqannadii qarniyo ka hor soo jiray, gaar ahaan kuwa ku saabsan Guurka iyo hab dhaqanka reeraha. Hase yeeshee, waxay dadka qaarkood arrintaas ku tilmaameen mid caqabad ku ah dadka hadda jooga xilliga casriga ah. Xitaa Soomaalida dhagahooda kuma cusba dhaqannada laga tix galiyo dhinaca guurka, waxaana bulshooyin badan caado u ah inay xeerkaas ilaaliyaan. …
TikTok waxaa la rumeysan yahay in 500 oo milyan oo qof ay si joogto ah u isticmaalaan, daafaha caalamka oo dhan. Kuwa ugu badan waa dhowr iyo toban illaa 20 sano jirro.Bartan oo muuqaallo yaryar oo kooban la geliyo waxaa aasaas u ah waxyabaha la xiriira muusikada. Tusaale, dhallinyarada waxay usoo lebisanayaan sida ay doonayaan, ka dibna muuqaal ayey iska duubayaan iyagoo hees dhageysanaya – muuqaallada noocaas ah waxay gaaraan meelo fogfog. Hase yeeshee sanadahan dambe waxaa baraha bulshada ay kuwa xiriirto kusoo biirayay wadaado badan oo Soomaali ah kuwaasoo wacdiga iyo faafinta diinta halkaa u mariya bulshada ku xiran. …
Dayax-gacmeedkii ugu horreeyay ee Carbeed ee loo dirayo meeraha Mariikh ama Farraare ee afka qalaad lagu yirahdo Mars ayaa lagu wadaa in hawada loo diro muddo toddobaadyo gudahood ah. Toddobaadka soo socda ayaa la filayaa in Dayax-gacmeedkaasi lagu shubo shidaalkii ugu horreeyay.Safarka Dayax-gacmeedkan ayaa qaadan doono toddobo bilood oo uu ku jari doono masaafo dhan 493 milyan oo kiiloomitir, si uu u gaaro meerahaasi Mariikh isla markaana uu xaruntii laga gamay u soo diro xog muhiim ah oo ku saabsan cimilada iyo jawiga meerahaasi. Dayax-gacmeedkan ayaa ku wareegi doono meerahani muddo 687 maalmood ah, si uu u soo uruuriyo xog …
Cirbixiyeennada oo in mudda ah baaritaanka waday waxay sheegeen meera aan dhulka ahayn iney tahay marki ugu horreysay biya laga helo.Barafasor Giovanna Tinetti oo hoggaaminaysay kooxda cirbixiyeennada baaritaanka waday oo ka tirsan Jaamacadda London (UCL) ayaa natiijad baaritaankooda ka soo baxday ee meeraha K2-18b biyaha looga helay ku tilmaamtay ‘mid maskaxda ka weyn’”Waa marki ugu horreysay oo aan meera dhulka ahayn biya ka helno kulka meerahasina wuxuu la mid yahay kan dhulka taasoo ka dhigayso mid ay nooluhu ku noolaan karan” ayuu yiri. Meraha loo yaqaanno K2-18b wuxuu dhulka uu ka fog yahay 650 milyan oo mayl. Meerayaasha ka baxsan …